Ny zava-misy any amin’ny faritra somary atsimon’ny Nosy iny, dia na matin’ny dahalo na mahafaty azy. Manomboka ritra ny omby, tsy mifidy zavatra halaina intsony ny dahalo. Efa lasibatra koa ny kisoa, ny akoho amam-borona, hatramin’ny entana ilaina amin’ny andavanandro na ny PPN. Misy toerana tokony hanaovana hetsika bebe kokoa toy ny any Ambalakindresy, hoy ny praiminisitra Ntsay Christian. Efa hatramin`izay no sarotra hidirana any amin`io toerana io tao anatin`ny taona maro saingy efa am-pelatanan`ny mpitandro filaminana izany. Nambarany fa tokony hitandrina ny olona fa betsaka ny mahita tombontsoa amin`ny halatra omby ary izy ireny no manely vaovao tsy marina. Nilaza ny lehiben`ny governemanta fa tokony hiara-kiaiky isika fa nihena ny tahan`ny tsy fandriampahalemana eto Madagasikara na an-tanàn-dehibe na ambanivohitra. Ny zava-misy any amin`ity distrika ity ihany koa dia mamono olona ny mpitandro filaminana. Na dia maro aza ireo zandary, polisy, miaramila maro any am-ponja noho ny fihoaram-pefy dia manahy ny mponina any an-toerana ka efa mivonona amin’ny fiarovan-tenany ny mponina. Ambalakindresy sy Morafeno, any Ambohimahasoa no tena faritra mena satria toa lasa tobin`ny jiolahy mihitsy. Tsiahivina fa tamin`ny taona 2017, namoy ny ainy ny ben’ny tanànan’ny kaominina Ambalakindresy sy ny rahalahiny, raha teny ambony môtô sy an-dalana handeha hamonjy fodiana iny. Nifamahofaho be ihany ny toe-draharaha mahakasika iny vono olona iny. Tao no nilaza fa hoe zandary nanara-dia dahalo tany an-toerana no nitifitra ity olom-boafidy ity sy ny olona niaraka taminy. Ao kosa ireo milaza fa jiolahy izay nanao vela-pandrika no nanao izany. Toa efa ho lava kosa eto ny resaka ambony latabatra momba fandraisan’andraikitry ny fanjakana manoloana ny tsy fandriampahalemana. Toa ambinambin-javatra ihany ity resaka ity, eny fa na dia manao ny ainy tsy ho zavatra aza ireo iraka vitsivitsy halefa hiady amin’ny dahalo.